Yintoni iTiger Woods? Cablinasian, Uthi
I-Woods yaqulunqa igama ukuze ichaze imvelaphi yakhe
Njengamanye amazwe aseMerika, ubuhlanga kunye nohlanga lweTiger Woods luqulethe izihlwele. Ngenye enye indlela yokuthi, i-Woods yintlukwano. I-Woods ibichazile ngokuthi "iCablinasian," igama esichaza ngezantsi.
Unina kaTols, u-Kultida , ungumthonyama waseThailand ozala yena uquka isiTshayina nesiDatshi, ngokweengxelo ezahlukeneyo kule minyaka.
Ubaba kaTols, u-Earl , wayengumAfrika-waseMerika ogunyazisiweyo, ngokwemithombo eyahlukeneyo, kwaquka ama-white, aseTshayina kunye namaNative aseMelika.
Ngoko ilifa leMithi likhulu kakhulu elimnyama kunye ne-Asia, kwaye libandakanya umzi omhlophe kunye noomthonyama waseMelika.
Ubani Ubakhathalele Ngeentlanga?
Abantu abaninzi, ngokucacileyo. Ngokukodwa xa i-Woods iqala ukufumana udumo, iseneminyaka yobutsha, kwihlabathi legalufa. I-Tiger yayisemncinci, isipho kunye nomnyama kumdlalo owawuphantse waba ngamagqabi (kunye namalungu eendaba kunye nabalandeli) abakudala (er) nabamhlophe.
Kwimbali yegalufu nemicimbi yohlanga nohlanga alukho olungileyo, ngakumbi xa kuthethwa ngabantu base-Afrika baseMerika. Ezi zinto zidlulileyo, kodwa kwi-1960s i-PGA yaseMelika inegama elithi "Caucasians-kuphela" elibhalwe kumqulu wayo. I-golfer yasekuqaleni emnyama kwi-Masters ayizange idlale kude kube ngo-1975 kwaye u-Augusta kazwelonke akazange avumele ilungu layo lokuqala lomnyama ukuya ngo-1990.
Kwakukho izifundo ezininzi zegalufi zaseburhulumenteni nezizimeleyo ezazingabandakanyi abamnyama ekudlaleni ngexesha likaJim Crow ; ezinye iiklabhu ezizimeleyo zaqhubeka zenzeke kude kube ngamaxesha amaninzi.
Kwintengiso yokuqala yeNike, uThomas wathi, "Kukho izifundo eUnited States ukuba andivumelekanga ukuba ndiyidlale ngenxa yombala wesikhumba sam." Wamkela (ukusuka kwezinye iindawo) ukugxeka oko, kodwa kwacaca ukuba yinyaniso yangempela ngelo xesha.
Xa i-Woods yokuqala yaqala ukuqhubela phambili kwindawo yokugalufa ngowe-1996, yayingumdlali wokuqala onokuluhlu olumnyama kwi- PGA Tour kwiminyaka emininzi.
Njengoko kuboniswe ngasentla, i-Woods inemvelaphi yeentlobo ezahlukeneyo zeentlanga, kwaye yafumana imibuzo ephindaphindiweyo malunga nohlanga.
Iingqithi zazingenakulungeleka ukufakwa kuloo meko. Ngo-1997, wabonakalisa ihlabathi ilizwi athe wathetha iminyaka ngaphambi kokuba azichaze ngokwakhe.
Iimali zeeTiger zeeTyhuni kwiXesha 'Cablinasian'
Unyaka wokuqala obizwa ngokuba yiWols njenge-golfer eyayiphambili ngo-1997 (wabuyela ngasekupheleni kwexesha le-1996 le-PGA Tour), kwaye unyaka wachaza igama elithi "Cablinasian."
Ebonakalayo kwi -Oprah Winfrey Show , uWolds wachaza ukuba kwiintsuku zakhe zakudala wacelwa ukuba abeke uphawu lokutshekisha kwiifom eziza kuhlanga lwakhe. Namhlanje, iifom ezinjalo, ukuba zinikezelwa kumntu, ziyakuthi zibandakanye inketho "yezizwe ezininzi". Ayikho emva koko.
Kwakunjengomntwana, uThomas wachaza u-Oprah, ukuba wadala i-Cabinasian portmanteau :
I-Ca ucasian I- Bl ack Kwi- dian (yaseMerika yaseMerika) yase-Asia
I-Ca + bl + e-Asia = i-Cablinasian
UMark O'Meara: Umsebenzi oManyeneyo ukhankanywe nguNyaka Omkhulu
I-Hexagram yokuSebenza kwiNkolo
Uqeqesho lokwakha umzimba - Ukwakhiwa kwezakhiwo zoLwakhiwo loQeqesho oluPhambili
Imfazwe Yehlabathi II: Ihlanganiswe B-24 Liberator